Vamwe vanhu muBulawayo vari kutambira chirongwa cheve chiuto chekubatsira kubaya veruzhinji nhomba sezvo bazi rezvehutano risina vashandi vakakwana.
Vanhu vakataura neStudio 7 mushure mekubaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vanoti vari kufara zvikuru nekuwaniswa mukana wekubaiwa nhomba pasi pechirongwa cheZimbabwe Defence Forces Week icho chakatanga nemusi weMuvhuro mumisha yeCowdray Park neEmganwini muBulawayo.
Mumwe mugari VaCosmos Ncube avo vave ivo munhu wekutanga muCowdray Park kubayiwa nhomba nhasi mangwanani vati vange vave nenguva vachiedza kubaiwa kumakiriniki ekanzuru asi vachitadza.
VaVengai Moyo avo vauya nemudzimai wavo kuzobaiwa vati chirongwa chevechiuto chauya panguva yakanaka sezvo nzvimbo dzakawanda dziri kubairwa nhomba dziri kuwandirwa nevanhu. Vati ivo nemudzimai wavo vatora danho rekubaiwa senzira yekuzvidzivirira.
Mudzimai waVaMoyo, Amai Chiedza Moyo vati vechiuto vanosiwonekwa neziso rakaipa nekuda kwenhoroondo yekushungurudza veruzhinji vakati vafara zvikuru nekuda kwechirongwa ichi. Amai Moyo vati vanhu havafanirwe kutya sezvo kubaiwa nhomba chagara chiri chinhu chinoitwa
Mumwe wechidiki Musale Dube uyo ane makore makumi maviri nematatu ekuberekwa ati afara zvikuru kuti akwanisa kubaiwa zvisinei nekuti ange asina chitupa sezvo chakarasika.
Mumwezve wechidiki Nomsa Butu uyo ane makore makumi maviri ati aona zvakakodzera kubaiwa nhomba nekuti ari kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa nechirwere cheCovid-19.
Andrea Andrea uyo ane makore gumi nemasere atsinhirawo kuti vanhu havafanirwe kutya kubaiwa achiti kubaiwa kunobatsira munhu kuzvidzivirira pachako wega uye kudzivirirawo vamwe.
Chiremba mukuru muZimbabwe National Army Dr Lieutenant Colonel Absolom Dube vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheZimbabwe Defence Forces Week chinosinyanya kubatsira veruzhinji nekuvaka zvinhu zvakadai sezvikoro kana kugadzira migwagwa nemabhiriji munzvimbo dzakasiyana siyana munyika.
Asi vati nekuveko kwechirwere cheCovid-19 vaona zvakakodzera kuisa ruoko rwavo kuti vashandi vavo, vachishanda pamwe nebazi rezvehutano pamwe nekanzuru, vabatsire muchirongwa chenyika chekubaya veruzhinji nhomba.
Kusvika nguva dza1 masikati vanhu vanopfuura mazana maviri vange vabaiwa panzvimbo mbiri dzinobairwa vanhu kuCowdray Park neEmganwini.
Chirongwa ichi chiri kuenderera mberi kusvika nemusi weChishanu. Hurumende ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi vanove zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika.
Dare remakurukota rakazivisa kuti rine hurongwa hwekuti makamba emapurisa ashandisweo senzvimbo yekubayira vanhu nhomba.